Ry kristianina havana, ny Evanjelin’i Masindahy Lioka toko faha-11 no novakiana tamintsika teo, mampianatra antsika hoe : mangataha, dony, ary mitadiava ny Tompo satria izay mangataka no homena, izay mitady no hahita ary izay mandona no hovahana, hoy i Jesoa teo. Raha jerentsika anefa ao amin’ny Evanjelin’i Masindahy Matio 6, 8 dia milaza amintsika hoe : “na mbola tsy mangataka aminy aza ianareo, fantatry ny Rainareo izay ilainareo”. Tsy mifanohitra akory ny voalazan’ny Vaovao Mahafaly fa ny tiana hambara dia hoe mahalala ny mahasoa antsika Andriamanitra, mahalala ny atao Izy. Eto aza anie dia lazainy mihitsy hoe : “koa ianareo na dia ratsy toy inona aza, mahalala manome zava-tsoa ny zanakareo, tsy mainka va ny Rainareo izay any an-danitra no hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka aminy”.
Fa na izany na tsy izany aza, ilay kiakiakantsika misandratra any Aminy, ilay masontsika mitodika any Aminy : io no ilainy. Tsy maintsy maneho ireo fihetsika ireo isika : mangataka, mandona, mitady. Tsy mahazo reraka ny amin’izany isika satria ny fanaovana lemozy dia mariky ny fitokisana. Andriamanitra akory tsy sahala amin’ny « bouton » ka hoe vao tsindriana dia misy eo no ho eo. Toetsain’ny olona ao anatin’ny tontolon’ny numérique ankehitriny izany. Fa Andriamanitra, miasa ao anatin’ny fotoana. Tandremo àry sao maika tsy faingana ka mitady vahaolana hafa ivelan’Andriamanitra, hivavaka amin’ny olombelona ary hanompo andriamanitra tsy izy no iafarany. Manàna fitokisana Azy na dia mafy aza ny ady atrehina. Tsarovy mandrakariva ilay tenin-drazantsika manao hoe: “Andriamanitra tsy andrin’ny hafa andriko ihany”.